हस्तमैथुनगर्नुकासातफाइदाहरुयस्ताछनथाहपाईराखौं – live 60media
काठमाडौं हस्तमैथुनका बारेमा मानिसहरुको विभिन्न धारणा छ । कोही यसलाई अश्लील उ’त्तेजित व्यवहार ठान्छन् भने कोही यसलाई सही ठा’न्छन् । तर विज्ञानले भने ह’स्तमै’थुन लाई ग’लत मान्दैन र यसलाई स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले राम्रो र सामान्य मान्छ । हस्तमैथुनको दौ’रानमा मानिस आफ्नो दिमागमा सु’न्दर पलहरुको कल्पना गर्छ र त्यसकै बारेमा सोच्न थाल्छ ।हस्तमै’थुन कुनै पनि कोणबाट गलत नभएको अध्ययनहरुले पुष्टि गरिसकेको छ यसलाई केटा र केटी दुबैले अभ्यास गर्नसक्छन् । केटाहरुमा यसको अभ्यास गर्ने इच्छा १७ वर्षपछि प्र’वल रुपमा ’त्पन्न हुन्छ । तर केही मानिसहरु भने यसको अभ्यास गर्दैनन् र जबसम्म कसैमा यसको इच्छा विकास हुँदैन तबसम्म यसको अभ्यास नगर्दा उचित हुन्छ । ह’स्तमै’थुन गर्नाले तपाईको शा’रीरिक विकासमा कुनैपनि अ’वरोध उत्पन्न गर्दैन । यसको अभ्यासले आखाँको मुनि ‘डार्क सर्कल’ बस्ने सम्भावना कम हुन्छ ।
हेर्नुहोस् ह’स्तमै’थुनको अन्य ७ फाइदाहरुत’नाव घटाउँछ: ह’स्तमै’थुनका क्रममा व्यक्तिको मु’टुको ध’ड्कन र श्वा’सप्रश्वास ती’व्र बन्छ । यसले गर्दा र’क्तसञ्चार ती’व्र हुन्छ भने मां’सपेशी पनि क्रियाशील हुन्छ यसबाट श’रीरमा भएका मा’नसिक तथा शा’रिरीक त’नावले नि’कास पाउने गर्छ । २. सु’रक्षित क्रि’या: यौ’न रो’ग ला’गेको व्यक्ति, ग’र्भवती महिला अथवा सेक्स गर्न न’मिल्ने रो’ग लागेका मानिसले पनि ह’स्तमै’थुनबाट शा’रीरिक तथा मा’नसिक स’न्तुष्टि पाउन सक्छन् ३. यौ’न दु’र्बलताको उपचार: शी’घ्र स्ख’लनलगायत यौ’न स’मस्या भएका व्यक्तिले ह’स्तमै’थुनमा’र्फत आफ्नो स’मस्या कम गर्न सक्छन् । ह’स्तमै’थुन गरेर ला’मो स’मयसम्म स्ख’लन हुन नदिने कला सिकाउने विधि यौ’न विशेषज्ञले दिँदै आएका छन् ४. मीठो निद्रा से’क्सको चर’मोत्कर्षमा पुग्दा उ’त्सर्जन हुने अक्सिटोसिन र इन्डोर्फिनलगायत हा’र्मोनले मीठो निद्रा लगाउने गर्छन् । ह’स्तमै’थुनका क्रममा पनि श’रीरमा यी हा’र्मोन उ’त्सर्जन हुने गर्छन् । त्यही भएर अ’निद्राको स’मस्या भएका मानिसका लागि ह’स्तमै’थुन राम्रो औषधि साबित हुन सक्छ ।
५ प्रसन्न बनाउँछ हस्तमैथुनका क्रममा मानिसको श’रीरमा उ’त्सर्जन हुने इ’न्डोर्फिन हा’र्मोनले मानिसलाई प्रसन्न बनाउने काम गर्छ । ६. रो’गप्रतिरो’धी क्षमता बढाउँछ: वी’र्य स्ख’लन हुँदा पुरुषको शरीरमा कोर्टिसोल नामक हा’र्मोनको मात्रा श’रीरमा बढ्न जान्छ । यस्तो हा’र्मोनले श’रीरको रो’गप्रति’रोधी क्ष’मता बढाउने गर्छ ।७. प्र’जनन् रो’ग घटाउँछह’स्तमै’थुनले प्रजनन्सम्बन्धी रोग लाग्ने सम्भावना कम गराउँछ । दिनहुँ ह’स्तमै’थुन गर्ने पुरुषमा प्रो’स्ट्रेट क्या’न्सर लाग्ने सम्भावना कम हुने विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । त्यस्तै, ह’स्तमै’थुनको नन्द लुट्ने महिलामा पा’ठेघरस’म्बन्धी इ’न्फेक्सन अथवा मू’त्रनलीमा इ’न्फेक्सन हुने सम्भावना पनि कम हुन्छ । । एजेन्सी
← शरीरका यी ५ अंगहरु ठूला हुने महिला हुन्छन् अत्यन्तै भाग्यमानी, पुरुषहरुले एकपटक अवश्य पढ्नुहोला !!
प्रेमी सँग कुरा गर्दा गर्दै म्यासेन्जर मै यस्तो छाडा हर्कत हेर्नुहोस भिडियो →